Mootummaan Jiddu Galeessa Riippabliika Afirikaa humnoota qabsoo hidhannoon socha’an 14 waliin waliigaltee malatteesse – Fana Broadcasting Corporate
Mootummaan Jiddu Galeessa Riippabliika Afirikaa humnoota qabsoo hidhannoon socha’an 14 waliin waliigaltee malatteesse
Finfinnee, Amajjii 30,2011 (FBC)- Mootummaan Jiddu Galeessaa Riippabliika Afrikaa humnoota qabsoo hidhannoon socha’an 14 waliin waliigaltee nageenyaa malateessan .
Mootummaan jiddu galeessa Rippaabiiliika Afirikaa humnoota biyyattii keessatti hidhannoon socha’an 14 waliini magaalaa biyyatii kan taate Baanguwii keessatti walii galtee nageenyaa walii malateessuu isaanii dubbatameera.
Waliigaltee nageenyaa irra kan gahan mootummaa fi mormitoonni erga magaalaa suudaan Kaartumitti marii irra guyyoota 10’iif turanii booda ,maricha irrattis kan hirmaatan, Innisheetivii Nageenyaa Afirikaa, gamtaa Afrikaa fi bakka bu’oota mootummoota gamtoomaniiti jedhameera.
Akka lakkoofsa Awurooppanota bara 2013 irraa kaasee erga mormituun isilaamaa Baaseeleeka jedhamu biyyatii qabatee booda, irra caalaan uummatoota Jiddu galeessa Rippaabilika Afrikaa kiristaan kan ta’an waan ta’eef biyyatiin gara jeequmsaatti galuun ishee ni dubbatama.
Walitti bu’insichi daran akka hamaatu kan taasise immoo akka madden adda addaa ibsanitti, farra Baaseeleeka kan jedhame minishaan kiristaanaa Baaseeleeka irratti waraana labsuu isaatiiniidha.
Waliigalteen nageenyaa mootummaa fi mormitootan malatteeffame kun biyyatiitti nageenya ni mirkaneessa jedhamee abdiin kan irratti gatame ta’uu gabaasichi ni hubachiisa.
Ameerikaan yaalii Misaa’eela furguggisu kan fageenya giddu galeessa taasiste
Al Bashiir himata malaammaltummaan mana murtiitti dhiyaatan
Hoong Koongitti lammiilee miiliyoona1.7 ol ta’an hiriira mormiif bahan
Dooniin Iiraan osoo gara Sooriyaa deemaa jirtuu qabamte gadhiifamte